Isikhathi esining impela, nomqondo sengqondo futhi engqondweni esetshenziswe khona womabili. Naphezu kwemizamo labacwaningi ucacise kusinye, kunzima ukukhomba mehluko abalulekile phakathi kwazo. Ngakho-ke, ekuboneni imiqondo le, sizama ukuthola ukuthi yini isimo sengqondo (noma sengqondo).
Ngaphansi isimo sengqondo umuntu ukuqonda eziyinkimbinkimbi kwezamasiko, ngokomzwelo, onobuhlakani nangokwengqondo izici ezithile ukuze isizwe esithile, ubuzwe noma uhlanga. Igama elithi eyaqanjwa isayensi nomlando, kodwa ukusetshenziswa kwalo kwanda kwabantu kanye psychology. Eqinisweni, umqondo sengqondo kuyinto ngempela esindayo futhi ihlanganisa izindaba ezifana nokuziphatha nokuziphatha, abasonti, engqondweni, ukuhlolwa, nezinye izici eziningi esivela eqenjini elithile emphakathini.
Njengoba bazijwayeze umqondo wazi ukuthi lesi simo sengqondo, sibheke ukubonakaliswa yayo imvelo nomphakathi.
Mentality eveza hhayi kuphela izici ngazinye ngazinye, kodwa futhi kulungiselelwa engenabuntu ukwazi komphakathi. Kolweni futhi siyaqoqwa ngesisekelo ukuthuthukiswa ezivamile zamasiko, zomlando kwezenhlalo nezomnotho emphakathini, isimo sengqondo nezici wazibona eqenjini labantu ukuzivumelanisa imvelo imvelo, zemvelo nezenhlalo. Ukuba equlekile, lezi imibono ukucacisa uhlobo imodi yesenzo yomuntu emhlabeni. Ngokucace sobala engqondo ikakhulukazi uma umuntu uthola indawo ezihlukene. Mentality ebonakaliswa ukuziphatha, amasiko, amasiko, izinkolelo, izilimi ngamazwi nangezenzo.
Iqiniso ukuthi enjalo yokucabanga eRussia wakhuluma ngempela sekwephuzile - kule XIX - ekuqaleni XX leminyaka. Ngaphezu kwalokho, ososayensi ngaleso sikhathi akazange basebenzisa igama elithi "sengqondo", futhi ukusebenzisa imiqondo ezifana "umphefumulo kazwelonke", "uhlamvu kazwelonke", "unembeza kazwelonke", okuyinto ngokuvamile ibonisa okushiwo lo mqondo. Ngezansi them they kwakusho Indwangu yomoya womphakathi. Namuhla, ososayensi baye bathuthela incazelo eziyinkimbinkimbi umqondo "sengqondo", ehlanganisa definition eziphathelene nenhlalo namasiko kanye zomlando-kwengqondo kwethemu.
kwamiswa sengqondo Russian ngokumelene isizinda emzabalazweni kanye nohlobo enemikhuba avaricious yeRussia, ezabafundisa ukubekezela nokulalela. Lobubhalo, rationality, ukusebenziseka intelligence Russian olutholakale ngokuba zonke izinhlobo yezandla
nokudoba, okuyinto Sekuyisikhathi eside umshado. Ukholo Orthodox is wakhulisa ingokomoya, ububele, uthando, umusa wethu nomuntu oqotho.
Ukungayinaki iwukugcina umthetho, kuhlanganise zomthetho, babevela abathengisi ukungathandi izivumelwano esisemthethweni. Ukwenza into, benza "hit ezandleni zakhe", sithembele uzakwethu izwi. I predominance wezindleko phezu siqu njalo yayikhona eRussia, njengoba omunye nenqubo yokuziphatha kwethu. wokuziqambela yanamuhla owenza izwe ihaba fomu libonisa ukuthi wayengekho isiko Russian.
Ulwazi okungukuthi yokucabanga, kubalulekile ukuqonda ukuziphatha umuntu esimweni esithile, futhi isitoreji impilo abantu, isizwe sisonke.
Tao - Iyini? Tao Te Ching: nokufundisa. Tao endleleni
Lezi zinhlobo ezehlukene omiyane
Izindlela Scientific njengoba ingxenye yezwe yolwazi
Ukunyakaza kwabantu noma izithunzi uqweqwe eMhlabeni: isikimu kanye nezinhlobo
Uwoyela Peach: Amathiphu ukusetshenziswa
Kungani ungeke ukushada ngonyaka eqa? Ngokubona kwabantu, ababhula ngezinkanyezi futhi esontweni
Uwoyela Fish ngoba izinja - ukusetshenziswa, inzuzo kanye nokulimala
I-Mitral valve iyaqhubeka - ingabe iyingozi?
Indlela ukukhetha straightener izinwele: ukubuyekeza models engcono kanye nokubuyekeza